Shirka Madasha oo la soo gaba gabeeyay iyo War-murtiyeedka oo goor dhow la soo saarayo – STAR FM SOMALIA
Shirka Madasha oo la soo gaba gabeeyay iyo War-murtiyeedka oo goor dhow la soo saarayo
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in la soo gaba gabeeyay shirkii Madasha wada-tashiga qaran, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay uga socday magaaladaas Hoggaamiyeyaasha qaran iyo kuwa dowlad goboleedyada maalmihii la soo dhaafay u socday.
Inkastoo shirka lagu waday in shalay gelinkii dambe la soo gaba gabeeyay ayaa dib u dhacay, kadib markii Madaxda Soomaalida ay ku kala tageen fadhiga, markii ay isku qabteen qodobada qaar.
Hase ahaatee kulamo xalay oo dhan socday illaa saaka ayaa la sheegay in lagu dhameeyay waxyaabihii mad-madowga ahaa ee la isku hayay.
Madaxda Maamul goboleedyada ayaa dib ugu laabanaya magaalooyinkii ay ka yimaadeen, iyadoo Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed uu maanta dib ugu laabtay Cadaado.
Waxaa lagu wadaa in goor dhow laga soo saaro war murtiyeed ku aadan faah faahinta qodobada horay loogu heshiiyay ee hirgelinga doorashada Hey’addaha dowladda iyo Madaxda qaranka oo qorshuhu yahay in la qabto bilaha Agosto iyo September ee sanadkan.
Madaxda Madasha ayaa isku raaciyay in 135 oday ee horay u soo xulay Baarlamaanka, isla markaana la isla gartay in xubnihii dhintay lagu bedelo kuwo cusub.
Waxaa kaloo la isku afgartay miisaaniyada ku bixi doonta doorashooyinka oo ka dhici doonta magaalooyinka maamul goboleedyada, halkaasoo laga soo xulayo Xildhibaanada.
Shirka Madasha ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan Madaxda Soomaalida, waxaana marka la soo saaro war murtiyeedka lagu wadaa in la guda galo doorashooyinka soo socda, iyadoo dalka oo dhan ka bilaaban doonaan olole doorasho.
Madaxweynha Galmudug oo Dib ugu laabatay Cadaado